Arbacada, December 5, 2018 Arbacada, December 5, 2018 Roma Kapadiya
Haddii aadan si cad u fahmin qallooca yar yar ee ku jira lambarka, waxaad ku dambayn doontaa cilado ku jira dalabkaaga. Haddii aad wax shaki ah qabtid, waad la tashan kartaa horumariyayaal kale oo websaydh ah oo dhammaystiran.
Roma Kapadiya waa falanqeeye SEO iyo sheeko-yaqaan 'Nimblechapps' - ashirkadda horumarinta barnaamijka isku dhafanKu saleysan Hindiya. Waxay aaminsan tahay adeegsiga istiraatiijiyad kala duwan si loo abuuro joogitaanka internetka ee ganacsiga oo ku faraxsan oo keenaya. Hiwaayad ahaan, waxay wax ka qortaa tikniyoolajiyada cusub iyo kuwa soo socda, bilowga, qalabka barnaamijyada, iyo ganacsiga iyo naqshadeynta websaydhka. Waad kala socon kartaa iyada Twitter iyo Facebook.